Kolombia: Mamoaka Olontsotra Mpanao Gazety Mampiasa Haino Amanjery Maro ny Fifaninana Iray · Global Voices teny Malagasy
Kolombia: Mamoaka Olontsotra Mpanao Gazety Mampiasa Haino Amanjery Maro ny Fifaninana Iray
Voadika ny 12 Janoary 2019 14:38 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, Deutsch, বাংলা, English
Mety hahatafiditra anao anatin'ny Googleplex ny fampisehoanao ny lafiny miafina ao Kolombia amin'ny alàlan'ireo fitaovana anaty aterineto, raha mandresy amin'ny fifaninanana “toerana voatantara tsara indrindra ao Kolombia” ianao. Hitondra anao mankany aminà vohikala amin'ny teny Espaniola ny ankamaroan'ireo rohy anatin'ity lahatsoratra ity, raha tsy misy fanamarihana manokana. Nanokatra fifaninanana miaraka amin'ny Google ny Gazety Semana ao Kolombia, fifaninanana natao ho an'ny rehetra, na inona na inona zompirenena zakainy, mba hanoratra, hampiseho sy hamorona votoaty milaza amin'izao tontolo izao ny momba anà toerana iray miavaka ao Kolombia tsy ho fantatry ny besinimaro amin'ny andavanandro, amin'ny fampiasàna roa amin'ireo fitaovan'ny Google fara-fahakeliny, toy ny Picasa, YouTube, Google Maps, Google Earth, SketchUp, Page Creator ary/na Panoramio, sy ny firaketana ny fikarohany sy ny fivoarany amin'ny alàlan'ny Blogger. Maro ireo lafiny hodinihan'ireo mpitsara amin'ny fanomezana ireo maripankasitrahana: ny kalitaon'ny votoaty, ny fahaizamamoron'ilay/ireo mpanoratra, ny fifandraisan'ny tantara amin'ny zavamisy, ny fivoaran'ny asa natao sy ny fampiasàna araka ny tokony ho izy ireo fitaovana voapetraka, ny fampiasàna ireo loharano samy hafa anaty aterineto sy ny fahalinana ary ny fanehoankevitra avy amin'ireo mpampiasa.
Hita ao amin'ny vohikala Colombia En El Mapa ireo torolàlana feno sy fampahalalàna momba ilay fifaninanana (amin'ny teny Espaniola). Iray amin'ireo endrika mahafinaritra ny hoe na dia fitsidihana ny Googleplex any Kalifornia aza ny loka, izay ahafahan'ilay mpandresy mihaona amin'ireo mpamokatra rindrambaiko namorona ireo fitaovana nampiasaina, dia tao an-tsain-dry zareo ny hasarotry ny fahazoanà visa Amerikana ho an'ny olom-pirenena Kolombiana, sy ireo maro hafa. Noho izany raha toa ka tsy manana visa Amerikana manan-kery ilay mpandresy, dia hasidin-dry zareo any amin'ireo biraon'ny Google any Arzantina izy ho solon'izay, i Arzantina izay firenena iray tsy ilàna visa ho an'ireo olom-pirenena Kolombiana.
Kolombia, ny hany mety ho risika dia ny fanirianao hijanona sary nalain'i *L*u*z*a*
Na dia voalaza anatin'ilay vohikala aza fa ny 31 Martsa ka hatramin'ny 6 Mey no hisokafan'ireo fandraisana anjara, efa afaka mijery sy mifidy ireo bilaogy mandray anjara ianao, 70 eo ho eo izy ireo amin'izao. Ohatra iray tena nankafiziko ny Chocoando. nandray ity asa ity am-po ny mpanoratra azy, José Alejandro González Vargas, fantatra amin'ny anarana barcelombia ao amin'ny YouTube, ary nampisongadina ny fiainana any amin'ny faritany amoron-dranomasin'i Chocó. Ao amin'ny bilaoginy Nativos, bilaogy fanadihadiana amin'ny ampahany, ary firaketany ny fitsidihany tany kosa amin'ny ampahany iray hafa, mamerina ireo tantara izy ary mampiseho ireo lahatsary izay hitafatafàny aman'olona, hiresahany amin'ireo tompontany sy hiraketany ireo zavatra azony tamin'ny fitsidihana ireo olona sy toerana tao Chocó. Tsy ny tsy firaharahiana ara-tantara avy amin'ny governemanta ihany no nihatra tamin'ny Departemantan'i Chocó, fa ny herisetra mitam-piadiana ihany koa, sy ireo tondradrano, haintany, ary hanoanan'ny vahoaka tompontany sy ireo vondrompiarahamonina Afro. Araka ny fanamarihan'ilay lahatsoratry ny wikipedia [en]: “Na dia manana tany sy zavaboary miavaka ary loharano tsy voatrandraka maro karazana dia maro karazana aza i Chocó, dia iray amin'ireo Departemanta ahitàna toe-piaina ratsy indrindra ho an'ny olombelona ao Kolombia.”
Ataony raharahany ny firaketana ireo endrika hafa an'i Chocó, ny tontolo manodidina, ny toerana, ny tantara sy ny vahoaka.
Asehon'ity lahatsary manaraka ity antsika ireo endritany kanto sy ireo endriky ny vahoaka, izay na eo aza ireo zava-tsarotra rehetra, tsy very tsiky mihitsy. Mitondra ny lohateny hoe Uribe, Castaño, Marulanda, Bush izy io, ary fangatahana ho an'ireo mihazona ny hoavin'i Kolombia am-pelatànany mba hikarakara ny vahoaka miaina eto. Ary koa, aza misalasala mitsidika ny fantsona Youtube an'i barcelombia sy mijery ity manaraka ity sy ireo lahatsary hafa nalaina manerana an'i Kolombia.
Bilaogy iray hafa mandray anjara ihany koa ny an'i Victor Solano izay nanoratra ny tantaranà tetikasa iray an'ny Rising Voices[en], Hiperbarrio tao amin'ny La Loma de San Javier, tao Medellín, Kolombia. Antsoina hoe La Loma toca el cielo ny votoaty nandraisany anjara, izay midika hoe “Mikasika ny lanitra i La Loma.
Afaka mijery ireo mpifaninana rehetra sy mifidy azy ireo ianao amin'ny fanarahana ity rohy ity.